November | 2017 | Hassan Mudane
Ficiladeena iyo go’aanadeena ma annagaa doorano mise cid kale ayaa inoo go’aamisa?
November 23, 2017 ·	by Hassan Mudane ·	in Faallo	· Leave a comment
Ficiladeena iyo go’aanadeena ma annagaa dooranay oo xor u ah mise cid kale ayaa inoo doortay? Waxaa jirta laba dooddood oo midba mida kale li’di ku ah, murankoodana waxa uu ku dulwareeganayaa xor u ahaanshiyaheena ku’aadan ficiladeena ama go’aanadeena iyo in kale, waana dood soo taagneed qarniyaal badan. Haddaba, maqaalkan waxaan ku lafaguri doonaa isla […]
November 17, 2017 ·	by Hassan Mudane ·	in Faallo	· Leave a comment
“Qalinkaa wax suureeya kugu sima halkaad doonto saaxiib kal furan weeye sunto fara ku hayntiisa waligaa ha sii deyn.” Abwaan Hadraawi *** Abaalmarinta 14 Oktoobar waa hay’ad qoraalka ku dhiirigalisa dhallinyarada Soomaaliyeed. Gu’ walba bishan oo kale, waxa aynu qaban doontaa tartan abaalmarineed ku saabsan curis qoraalleedyo, lana soo bandhigi doono mowduuc akademiyeedyo kala duwan […]
November 13, 2017 ·	by Hassan Mudane ·	in Faallo	· Leave a comment
Marar badan ayaynu is aragnaa annaga oo dhax taagan xaalad aynu ku qasbannahay in aynu qaadanno go’aan li’di ku ah dhaqankeenna, diinteenna iyo xeerarka caalamiga. Haddaba, maxaad fali laheyd haddii aad la kulmi laheyd xaaladdan oo kale: *** Adiga iyo wiil yar oo 10 jir ah, waxaad u kalluumeysi takteyn badda biyaha furan. Laba maalin […]
November 8, 2017 ·	by Hassan Mudane ·	in Faallo	· Leave a comment
Marar badan ayaynu is aragnaa annaga oo dhex taagan xaaladda laba daran mid dooro, waana xaalad dhacda qeyb walba oo ka mida nolosha. Xilligan oo kale, qofka ma sameeyo go’aan ilaa inta uu ka cabiro/xisaabiyo natiijada ama saameynta uu yeelan karo go’aanka. Maxaad fali laheyd haddii aad la kulmi laheyd xaaladdan oo kale: *** Xaaskaaga […]
November 7, 2017 ·	by Hassan Mudane ·	in Faallo	· Leave a comment
Inta badan waxa aynu isweydiinaa go’aannada aynu sameyno in ay yihiin kuwa sax ah iyo in kale? Saxnimadeeda iyo khaladnimadeedase maxaa go’aamiya? Gu’gii 2005, dowladda maraykanka waxa ay ciidan gaar ah u dirtay howlgal lagu doonaayey in lagu soo qabto hoggaamiyihii ururka Taalibaan Mulla Omar. Goorta ay ciidanku dhex sii marayaan ayaa waxaa ka hor […]
Inta badan waxa aynu calaamad su’aal dul-dhignaa go’aannada aynu sameyno in ay yihiin kuwa sax ah iyo in kale? Saxnimadeeda iyo khaladnimadeedase maxaa go’aamiya? Kaba soo qaad in aad darawal ka tahay gaari xammuul ah, adiga oo ka soo daadagaya waddo dalcad ah, ayaad kor ka aragtay gaari waddada horteeda taagan oo ay ku dhex […]
Maansadii darartii Maandeeq
November 4, 2017 ·	by Hassan Mudane ·	in Faallo	· Leave a comment
Dulmahaan u doodaa Diracaan dhoweystaa Danyartiyo agoontaan Dusha xanaf ka qabatiyo Daqarrada u diidaa. Babbadkiyo dabeeyshiyo Dulduleelka hoosaan Ka daardaariyaayoo Dugsi dhaxanta celiyiyo Dayr baan u ahay wayn. Dalku waa dalkeeygii Dadku waa dadkeeygii Diinta iyo dhaqankiyo Diirkiyo dubaaqiyo Dareenkaan ka simannahay. Laba doodday waa daw Laba dirirtay waa duug Darma dhigasho waa gacal Is […]